Bilow noloshaada cusub ee Iswiidhan | Informationsverige.se
Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Anigu waxaan helay sharciga deganaanshaha / Bilow noloshaada cusub ee Iswiidhan
Dib u cusboonaysiinti ugu dambeysay: 20 6 2019
Halkan waxaad ka helaysaa macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan waxa aad u baahantahay inaad samayso iyo nooca hey'adaha dawladeed ee aad u baahantahay inaad la xiriirto marka aad hesho sharciga deganaanshaha.
Skatteverket (Wakaaladda cashuuraha)
Diiwaan-geli u soo guurida Iswiidhan
Marka aad u soo guurto Iswiidhan waa inaad ka diiwaan-gashanaataa halkan. Si aad u gasho diiwaan gelinta dadweynaha waa inaad samaysaa wargelinta inaad u soo guurtay Iswiidhan. Tani waxaad samaynasaa adigoo booqanaya Hey'adda Cashuuraha xafiiskeeda adeegga.
Marka aad booqato Hey'adda Cashuuraha si aad u diiwaan-geliso u soo guuridda Iswiidhan waa inaad xitaa dhiibtaa macluumaad si aad u gasho diiwaan-gelinta dadweynaha. Dhammaan dadka ku jira qoyskaaga ee u soo guuray Iswiidhan waa inay ka mid ahaadaan marka aad samaynaysaan wargelinta guuridda si aad u gashaan diiwaan-gelinta dadweynaha, xitaa carruurta. Marka Hey'adda Cashuuruhu kuu samayso diiwaan-gelinta dadweynaha adiga iyo qoyskaaga ayaad helaysaan warqad timaada cinwaanka aad qorteen inaad u guurteen lehna lamabarradiina shakhsiga.
Bogga intarnatka ee Hey'ada Cashuuraha ka akhri halka aad ka helayso xafiiska adeega ee kuugu dhow iyo waxay iyagu kaa caawin karaan.
Ka hor intaanad booqan xafiiska adeegga waxaad buuxin kartaa "Wargelinta u soo guurida Iswiidhan" lagana helayo Heya'adda Cashuuraha boggeeda intarnatka. Halkaas ayaad sidoo kale ku arkaysaa nooca macluumaadka iyo dukumentiga loo baahanyahay,waxaana in yar ka dhakhso badnaan karta marka aad joogto Hey'dda Cashuuraha xafiiskeeda adeegga. Dadka oo dhan way heli karaan oo waa isticmaali karaan adeeggan elaktaroonigga ah. Marka aad buuxiso wargelintan micnaheedu waa in aad daabacdo oo u soo qaadato xafiiska adeegga. Haddii aanad haysan kombiyuutar waxaa jira kombiyuutarro aad ka amaahan karto xafiiska adeegga.
Halkan waxaad ka helaysaa adeegga elaktaroonigga ee "Samee wargelinta u soo guurida Iswiidhan" oo dhowr luqadood ah.
Folkbokföring (Diiwaangelin dadweyne)
Dhamaan dadka ku nool Iswiidhan waxaa lagu qoraa diiwaan-gelinta dadweynaha.diiwaan-geliyaa. Halkaas waxaa lagu diiwaan-geliyaa macluumaadka ku saabsan dadka ku nool Iswiidhan iyo halka ay deganyihiin.
Marka aad booqaneyso Hey'adda Cashuuraha xafiiskeeda adeegga si aad u samayso wargelinta guuridda oo aad iska diiwaan-gelinayso diiwaan-gelinta dadweynaha waxaa aad muhiim ah in aad ka jawaabi karto su'aalaha Hey'adda Cashuuraha u baahantahay in laga jawaabo. Haddii ay meesha ka maqanyihiin dukumenti ama jawaabo khuseeya su'aalaha qaarkood waxaa wakhti aad u dheer qaadan karta in la galo diiwan-gelinta oo la helo lambarka shakhsiga.
Haddii aad macluumaad sax ah u dhiibtay Hey'adda Cashuuraha waxay qaadan kartaa qiyaastii afar toddobaad in la galo diiwaan-gelinta dadweynaha. Codsiyada ay ku jiraan macluumaadka oo dhan ayaa leh mudnaanta. Haddii macluumaad maqanyihiin waxaad sugi kartaa wakhti aad u dheer, laga yaabo dhowr bilood. Markaas waxaa xitaa muhiim ah inaad dhiibtay macluumaadka halka lagaala soo xiriirayo oo sax ah. Adigu waxaad sugi kartaa wakhti intaas ka dheer haddii iyagu aanay ku heli karin si ay kuu weydiiyaan waxa aanad ka jawaabin ama aanad dhiibin. Sidaas darteed waxaa muhiim ah inaad wargeliso Hey'adda Cashuuraha haddii aad guurto ka hor intaanad helin jawaabta wargelintaada guuridda. Si waraaqahaagu u tagaan cinwaan sax ah.
Dhanka Hey'ada Canshuuraha xafiiskeeda adeega waxaad u baahanaysaa inaad u soo qaadato:
Baasaboor, haddii aad haysato baasaboor
Sharciga deganaansho ee Iswiidhan
Dukumenti cadaynaya inaad tahay xaas ama in kale
Caddaynta dhalashada ee caruurtaada haddii aad leedahay caruur
Ka akhri bogga intarnatka ee Hey’adda Cashuuraha waxa shuruud u ah si aad u awooddo inaad gasho diiwaan-gelinta dadweynaha iyo waxa aad u baahantahay inaad u sii qaadato.
Personnummer (Lambarka shakhsiga)
Marka aad jawaab ka hesho Hey'adda Cashuuraha in aad gashay diiwaan-gelinta dadweynaha waxaad xitaa helaysaa lambarka shakhsiga. Lambarka shakhsiga waa lagama maarmaan maxaa yeelay:
La awoodo gudoonka gunooyinka kale ee ka yimaada Qasnada Caymiska.
Furashada xisaab bangi.
Codsashada dukumenti aqoonsi.
Codsashada aqoonsiga elaktarooniga ah.
Ka qayb-qaadashada hawlaha Xafiiska Shaqada barnaamijkeeda dagnaanshaha.
Akhri dheeraad ku saabsan tobanka lambar ee aqoonsiga kuna qoran bogga intarnatka ee Hey'ada Cashuuraha.
La xiriir Hey'ada Cashuuraha si aad u hesho tobanka lambar ee aqoonsiga.
Xiriirka filimka ku saabsan lambarka shakhsiga ah.
ID-kort (Kaar aqoonsi)
Id-kort waxaa loo soo gaabiyay kaarka aqoonsiga Waxaad kaarka aqoonsiga u isticmaalaysaa inaad cadayso da'daada iyo in lagugu aqoonsado (muujiso qofka aad tahay), tusaale ahaan marka aad dawo ka soo qaadanayso farmasiga, lacag ku bixinayso kaar gudaha dukaan ama samaynayso arin bangi. Waxaa kale oo aad kaar aqoonsi ka codsan kartaa qaar ka mid ah xafiisyada adeega ee Hey'ada Canshuuraha.
Dheeraad ku saabsan kaarka aqoonsiga ka akhriso bogga Hey'adda Canshuuraha.
Ka hor intaanad booqan xafiiska adeega si aad u codsato kaarka aqoonsiga, waa inaad:
ka diiwaan-gashantahay gudaha Iswiidhan,
buuxisay 13 sano,
bixisay kharashka codsiga oo ah 400 karoon isla markaana tusi karto rasiidhka ama daabacaada xisaabta bangiga ee cadaynaysa inaad bixisay lacagtan,
muujin karto qofka aad tahay (cadayn karto aqoonsigaaga). Sii qaado dukumenti aqoonsi oo ansax ah (tusaale ahaan baasaboor) ama sharci deganaansho oo ansax ah,
haysataa waalidkaaga ogolaanshahooda (haddii aad ka yarthay 18 sano).
Xiriirka filimka ku saabsan kaarka aqoonsiga.
Samayso xisaab bangi
Halkan waxaad ka akhrin kartaa wixi ku saabsan xisaabta bangiga.
E-legitimation (Aqoonsiga internetka)
Aqoonsiga elaktarooniga ah waa aqoonsigaaga dhanka intarnatka ee caddaynaya adigu aad tahay qofka aad tahay. Waxaad isla aqoonsigan elaktarooniga ah u isticmaali kartaa adeegyad intarnatka iyadoo aan ku xirnayn hey'ad dawladeedeed, degmada ama shirkada gacanta ku haysa adeegan (tusaale Xafiiska Shaqada iyo Hey'ada Canshuuraha).
Waxaad samaysanaysaa aqoonsiga Bangiga iyo aqoonsiga Bangiga ee Moobilka ee dhanka bangiga aad ka tahay macmiil.
Dheeraad ku saabsan aqoonsiga elektaroonigga ah ka akhri Hey’adda Cashuuraha boggeeda intarnatka. Macluumaadka waxaa la helayaa isagoo ah Iswiidhish oo keliya.
Arbetsförmedlingen (Xafiiska shaqada)
La xiriir Xafiiska Shaqada
Waa muhiim inaad la xiriirto Xafiiska Shaqada sida ugu dhakhso badan ee suurtagal ah ka dib markaad hesho go'aankaaga sharciga degganaanshada. Xafiiska Shaqada ayaa go'aaminaya haddii aad ka qayb qaadan karto barnaamijka sal-dhigashada.
Xafiiskaaga shaqada ka helo Xafiiska Shaqada boggiisa intarnatka.
Marka aad booqaneyso Xafiiska Shaqada waa inaad qaadataa go'aankaaga sharciga degganaanshada ee aad ka heshay Hey'adda Socdaalka. Waxa ugu horeysa ee dhacayaa waa in aad samaynaysaan daraasad si aad u hesho qorshe lagu dhaqmo oo adiga kugu haboon. Daraasada waxaa la bilaabi karaa ka hor intaanad gelin diiwaan-gelinta dadweynaha ee aanad helin lambarkaaga shakhsiga laakiin waa inaad haysato dukumenti ah in aad heshay sharciga degganaanshada oo waa inaad awooddo inaad is caddeyn kartid. Inta daraasadan socoto waxaad gunno ka helaysaa Qasnadda Caymiska.
Adigu waa inaad ku jirtaa diiwaa-gelinta dadweynaha oo heshay lambarkaaga shakhsiga ah si aad u awooddo in lagu qoro barnaamijka sal-dhigashada. Sidaas darteed waxaa muhiim ah inaad ka jawaabto su'aalaha Hey'adda Cashuuraha marka aad samayso wargelinta u soo guuridda Iswiidhan si laguu geliyo diiwaan-gelinta sida ugu dhakhso badan ee suurtagal ah.
Adigu waa inaad ku qorantahay barnaamijka sal-dhigashada si aad u awooddo inaad bilowdo hawlaha dhinaca jidka ku aadan shaqo ama waxbarasho. Adigu waxaad fursad u haysataa inaad gunnada sal-dhigashada ka codsato Qasnadda Caymiska.
Akhri dheeraad ku saabsan barnaamijka sal-dhigashada kuna qoran Xafiiska Shaqada boggiisa intarnatka.
Försäkringskassan (Qasnadda caymiska)
Lacagta magdhabida ee laga helo Qasnada Caymiska
Marka lagaa diiwaan-geliyo qorshaha dagnaanshaha ee Xafiiska Shaqada waxaa codsanaysaa lacagta magdhabka laga helo Qasnada Caymiska. Waxaad u codsanaysaa calaa bil oo ah ka dib.
Dheeraad ku saabsan gunnada sal dhigashada ka akhri Qasnadda Caymiska boggeeda intarnatka. Macluumaadka waxaa la helayaa isagoo ah Iswiidhish oo keliya.
Qasnadda Caymiska waxay samaysay filim ay ku sharaxayaan waxa ay tahay gunnada sal-dhigida iyo sida aad u dalbanayso gunnadan. Filimkan waxaa la helayaa isagoo ah af Iswiidhish oo keliya.